Darajooyinka Sharciga ee Sharciga iyo Daraasaadka Sharciga »Hodges U
Categories: associate, Bachelor, Daraasaadka Sharciga, Master-ka, Tilmaamaha internetka
Xulo Barnaamijka Daraasadda Sharciga ee Abaal-marinta Marka Aad Dooratid Hodges U
Ganacsiyada maanta iyo ururada aan macaash doonka ahayn waxay wajahayaan nidaam sharciyeysan oo sii kordhaya iyo jawi sharciyeed, taasoo keentay baahida xoogan ee loo qabo shaqaalaha leh tababarka sharciga. Haddii aad bilaabeysid sharci ahaan Paralegal ama aad raadineyso inaad ku guuleysato Juris Master (Master's ee Daraasaadka Sharciga) - barnaamijyadeenu waxay bixiyaan aqoonta aasaasiga ah ee loogu baahan yahay inaad ku guuleysato xirfaddaada!
Kuxirnow Daraasadaha Paralegal. Haddii aad leedahay tababar ugu yar ama aad ka bilaabayso dhinaca sharciga, ka dib ka bilow Associate in Paralegal Studies Degree. Barnaamijkan shahaadada ah ayaa loogu talagalay in loogu diyaariyo ardayda boosaska loo baahan yahay laga bilaabo maalinta koowaad.
Bachelor of Science ee Daraasaadka Sharciga. BS ee Daraasaadka Sharciga waa waddo aad ufiican oo lagu raadsado waxbarasho qareen ahaan ama aad dhigato dugsiga qalin jabinta ee Juris Master. Qalin jabiyayaashu waxay sheegeen inay dareemeen inay si wanaagsan ugu diyaar garoobeen mustaqbalkooda mustaqbal iyagoo ku saleynaya waxbarashadii ay ka heleen Hodges U.
Juris Master (JM) Hore wuxuu Master uga ahaa Daraasaadka Sharciga. JM waxaa loogu talagalay qareeno aan aheyn waxaana loogu talagalay inay siiso xirfadleyda xirfadaha sharci ee ay ugu baahan yihiin ee muuqaalka faa iidada iyo faaiidada, gudaha iyo aduunkaba.
Koorsooyinkayaga billaha ah ee bilowga iyo barnaamijyada la dedejiyey waxay suurtogal ka dhigayaan inaad dhammaystirto waxbarashadaada, xawaarahaaga iyo adiguba jadwalka - haddii aad xaadirto wakhti buuxa ama waqti dhiman. (Eeg hoosta si aad u hesho macluumaad buuxa oo ku saabsan barnaamijyadeena shahaadada.)
Iskuulada ugu Fiican: Barnaamijyada Master-ka ee ugu Fiican ee Daraasaadka Sharciga
Iskuulada ugu Fiican ee Kufsiga: 10-ka Barnaamij ee Heerka Sare ee Shahaadooyinka Sharci-yaqaanada Ugu Fiican
Iskuulada ugu Fiican: Barnaamijyada Bachelor-ka ee 'Bachelor's Paralegal' ee ugu Fiican
2 Sannad Wadaageyaasha Online: Shahaadada Sare ee 10 ee Darajada Daraasadaha ee Khadka Tooska ah
Kulliyadaha badankood ee la awoodi karo: 100 Kulliyadaha Daraasaadka Sharciga ee ugu Awooda Badan 2021
Bachelor-ka ee Daraasaadka Sharciga
Master Juris (JM)
Maxaad Ugu Baahan Tahay Juris Master (JM)
JM waxaa loogu talagalay ardayda sida Sharciga laakiin ma doonayo inaad noqoto Garyaqaan.
Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay Koorsooyinka 10 waana la dhameystiray 100% khadka tooska ah.
Waxaa loogu talagalay ardayda inay kordhiyaan aqoontooda fikradaha aasaasiga ah ee sharciga ee ku lug leh mowduucyada sida Sharciga ka-hortagga midabtakoorka iyo aragtida kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada.
Wax ka baro arrimaha maadada sida Cilmi baaris sharciyeed, Gorgortanka iyo U-doodista, Sheeko sharci, Iyo in ka badan.
Manhajka JM waxaa loogu talagalay kor u qaadista xirfadaha fikirka muhiimka ah.
Maxaa loogu talagalay Barnaamijka JM ee Hodges?
Hodges waa dugsigii ugu horreeyay ee aan sharci ahayn ee ku yaal Florida oo bixiya shahaadada Juris Master
Loogu Magac daray Top 10 Best Online Master ee Shahaadada Daraasaadka Sharciga - 2019.
Professor-ku waa qareeno khibrad xirfadeed u leh koorsooyinka ay dhigayaan.
Waxaa Loogu Magacdaray 14 Masters-ka Ugu Fiican Online-ka Daraasaadka Sharciga.
Aqoonyahanada ardayda tartami si loo ballaariyo fikradahooda.
Ciidan iyo Halyeey Saaxiibtinimo.
Ganacsade / Iskaashi Ganacsi
Hada qorista ardayda Juris Master.
JM Degree Isku xigxiga
Muuqaalka Shaqada iyo Isugeynta Mushaharka
Horay u soco oo horay u soco, Codso Maanta!
BS ee Daraasaadka Sharciga waxay Bixisaa Aasaasid Adag oo ku jirta Aragtida Sharciga iyo Tababbarka Loogu Baahan Yahay Dugsiga Sharciga ama Juris Master
BS ee Daraasaadka Sharciga waa manhaj dhameystiran loogu talagalay inay aasaas adag ka bixiso aragtida iyo ku dhaqanka sharciga.
Waxaa loogu talagalay in ardayda loo diyaariyo ku raadso shahaadada qalin-jabinta sharciga iyo maadooyinka kale sida JM, JD, Caddaaladda Dambiyada, Sayniska Siyaasadeed, Maamulka Daryeelka Caafimaadka, ama Dowladda.
Hesho hal-abuurnimo ELitigation sharciga tababar la eDiscovery iyo ELitigation koorsooyinka.
Qalinjabiyeyaasha BS ee Daraasaadka Sharciga ayaa gaadhay xirfadaha iyo tababarka si loo fahmo eraybixinta sharciga ah ee lagama maarmaanka u ah in si iskaashi leh loola shaqeeyo qareennada iyo xirfadleyda kale ee sharciga sida Kaaliyeyaasha Sharciga, Kaaliyeyaasha Maxkamadda, Saraakiisha Carbinta, Kaaliyeyaasha Cilmi-baarista, ama Kormeerayaasha Maamulka.
Our aqoonyahannada waa qareeno khibrad leh, keenaya dunida dhabta ah galay fasalka.
Adigu Si Fudud Kuma Qarsoodi Karto Hodges!
100% shaqada koorsada internetka ayaa tan ka dhigaysa barnaamij la heli karo dadka waaweyn shaqeeya.
Hodges Ka mid ah 2019 Darajooyinka Sharciga Bachelor-ka ee ugu Fiican ee Florida.
Qalin jabiyayaashu waxay soo sheegeen in xirfadihii ay ka heleen barnaamijka barashada sharciga ay si fiican ugu adeegeen maadaama ay u wareegeen iskuulka sharciga.
Qalinjabiyeyaasha BS ee Daraasaadka Sharciga ee aan ku sii socon shahaadada sharciga waxay ku sii wadi karaan Juris Master ee Hodges U.
Maareeyaha Qandaraasyada Sharciga
Maareeyaha Xafiiska Sharciga
BS ee Iskuxirka Darajada Daraasaadka Sharciga
Macluumaadka Bixinta Miisaanka iyo Shaqada ee Xirfadaha Sharciga
Kuxirnow Daraasadaha Paralegal
Tartan tartiib tartiib tartiib tartiib ah oo shaqeynaya!
Readies ardayda ilaa fadhiiso waayo, Imtixaanka Aqoonta Sare ee Paralegal or Kaaliyaha Sharciga ee La Xaqiijiyey / Imtixaanka Sharciga ee Sharci yaqaan.
Dhammaan shirkadaha sharciga qaanuunku waxay u baahan yihiin kalkaaliyeyaal iyo kaaliyeyaal sharci, iyagoo ka dhigaya AS ee Daraasadaha Paralegal an ikhtiyaariga ah ee loo baahan yahay in lagu bilaabo ka shaqeynta sharciga.
Qalinjabiyeyaasha ka socda AS-da ee Daraasadaha Paralegal barnaamijku baahi weyn ayaa loo qabaa maxaa yeelay tababbarkayagu wuu diyaariyaa bilaabi inaad u shaqeyso shirkad sharciyeed maalinta koowaad.
Lagu bixiyay 100% khadka tooska ah format.
Sharcigu had iyo jeer wuu is beddelaa. U diyaargarow isbedeladaan markaad dooraneyso kuweena tabo cusub, tabo bar-adag fasallada sida Teknolojiyada, Xeerarka Maxkamadaha iyo Nidaamyada, Sharciyada cusub, iyo Sharciga Kiiska.
Gain xirfadaha si wax looga qabto eDiscovery iyo ELitigation.
Ku Bilow Daraasaadka Sharciga, Codso Maanta!
Maxaa Looga Qayb Galayaa Hodges?
Hodges ayaa lagu magacaabay Top 10 Associate ee Daraasadaha Paralegal Online.
Waxaa aqoonsaday kuliyadaha ugufiican sida Bachelor-ka ugu Fiican ee Barnaamijka Daraasadaha Paralegal.
The AS ee Daraasadaha Paralegal waxay kaa dhigeysaa inaad tahay musharax aad u fiican Hodges 'Bachelor ee Daraasaadka Sharciga.
Koorsooyinka Billaha ah ee Is-bedbeddela loogu talagalay dadka waaweyn ee shaqeeya.
Bixi Miisaan iyo Macluumaadka Muuqaalka Shaqooyinka ee Paralegals
AS ee Iskuxirka Darajada Shaqo
Majani Lullein (Madaxweyne ku xigeenka), ESL, Paralegal iyo Proud Hodges U Grad
Markii uu dhamaystay barnaamijka ESL-ka, Majani wuxuu iska qorey Hodges 'Associate of Science ee barnaamijka barashada cilmiga sharciga, isagoo leh, "Anigoo ah jiilkii ugu horeeyey ee arday jaamacadeed ah, marwalba waxaan xiiseynayey sharciga iyo sida xukunada maxkamadaha ay saameyn ugu yeeshaan arrimaha halista ah. adduunka. Waxaan sidoo kale dareemay inay shahaado wanaagsan u noqon laheyd xirfadlayaal ganacsi oo madax banaan sida aniga oo kale. ”
Majani Lullein waxay sii wadaa inay ahaato afhayeen jaaliyadeed, iyadoo sheekadeeda guusha la wadaagaysa TV-yada, joornaalada, joornaalada iyo raadiyaha, iyadoo leh, "Waxaan la kulmay dad ila wadaagaya khibradooda Hodges. Qaar badan oo ka mid ahi waa soo galooti, ​​dad leh rajo weyn iyo riyooyin, waxayna ii sheegeen in sheekadayda ku saabsan ka gudubka afafka iyo caqabadaha dhaqanka ay ku dhiirrigelisay inay wax badan bartaan, si adag u shaqeeyaan oo ay waxbarashadooda helaan. ”